wezuga London St Pancras na 9:24 am Eurostar na Paris Nord, gbanwere ọdụ site na tagzi, ma were ya 2:41 pm TGV si Paris-Lyon ka Oulx, na-abịa na 7:23 pm. Site n'ebe ahụ, ọ bụ 15 nkeji bọs ma ọ bụ taxi.
Ị na-ama juru n'ọnụ gị akpa? Good! n'ihi na nke ahụ bụ hardest akụkụ nke njem ota. Ntinye akwụkwọ ụgbọ oloko gị ga-mere nkeji, enweghị admin ụgwọ! Gịnị a ụtọ! Gị Save A Train ugbu a na akwụkwọ ezumike nke ndụ.